Amakhamera Ama-9 Ahamba Phambili Wokuthenga (Ikhwalithi / Intengo)
8 Julayi 2020 NgoJuni 8 we-2020 por Bruno Esteves
Lapha sikhombisa Ikhwalithi eyi-9 engcono kakhulu yamakhamera wekhamera / intengo ukuthenga.
I-SJCAM SJ8 Pro
Ayikwazi ukuthola Ikhamera Esebenzayo ukuqoshwa a [Email protected]?
Usuyindawo efanelekile, i-SJCAM SJ8 Pro izokulungela wena!
Ikhamera yesenzo iyakwazi ukuqopha kusuka [Email protected], kodwa impela ikhamera ayisekelwe kulowo mandla kuphela.
Yebo, le divayisi ingafinyelela ku Izikhathi ze-8.
Jula ukuqiniswa kwesithombe kwisinqumo esiphezulu sokurekhoda, esingeyona ikhamera.
Kulabo abambalwa abaletha khona Uhlobo lwe-USB ukwenza lula ukushaja idivayisi njengokudluliswa kwedatha.
Isikrini siyi Amasentimitha angu-2.33 kanye nesinqumo se-640 × 360 nge 370 ppi, lokhu kukhombisa ukuthi ungabuka okuqoshwa noma izithombe kule khamera ngekhwalithi futhi onayo isikrini sokuthinta.
Ibhethri ye- I-SJCAM SJ8 Pro futhi akudumazi ukuba 1.200 mahkungaba ukumelana Imizuzu yokurekhoda ye-90 ku [Email protected], kuyilokho ngempela.
Kepha asiyeki lapha, le khamera ingenza ukuqoshwa okukhulu ngaphansi kwamanzi, ibe ngenye yezinhloso zalokhu kepha ngesembozo esingemanzi.
Usengakwazi ukusebenzisa aplicação futhi wenze ukuhlela izithombe ezithathwe.
Ungenza ngokwezifiso imenyu yedivayisi, thatha isitayela se-classic noma iOS.
Enye ye best Cameras Action emakethe.
Ungaphinde uchithe isikhathi esithile futhi ube nalunye lwalezi ezizothatha nawe yonke indawo.
Ikhamera yesenzo I-SJCAM SJ8 Pro
Ubukhulu X x 62.5 41 28.8 mm
Usayizi weskrini 2.33 amasentimitha
Isixazululo sesikrini 640 × 360
Isikrini sokuthinta Yebo
Umseshi Ambarella H22
inzwa I-Sony IMX377 12MP
Inkambu Yokubuka I-170º
Isixazululo esikhulu sevidiyo [Email protected]
I-Memory Card Slot Yebo (microSD kuya ku-128 GB)
Imemori yangaphakathi N / A
Ibhetri 1.200 mah
Lokhu kungenye yamaKhamera asebenza phambili kunawo wonke emakethe, i Xiaomi YI 4K.
Lo mkhiqizo awudingi ukushicilelwa, bahlale benakekela ngokunikeza ikhwalithi engcono kunazo zonke kumsebenzisi nakwamanani GoPro ekukhanyeni kweso.
Njengoba igama lemodeli lisho, lokhu ikamelo isenzo singarekhoda [Email protected] futhi iyakwazi ukuqinisekisa ikhwalithi enhle kakhulu, njengakwezinye izinqumo, kunzima ukuthi ungamangali yile divayisi.
Ama-constants Izibuyekezo ukuthi umkhiqizo utholakala kudivayisi kwenza kube lula ukukhetha le divayisi ngaphandle kokuthi ucabange ngezikhathi ze-2 kwezinye amaKhamera ezenzo.
Imininingwane ebalulekile yalokhu imishini yinto engenziwa Ukusakaza ngokuqondile ikhamera, noma I-FaceBook noma ku- Youtube.
Kodwa ukudumisa akuphelile, le divayisi ingakwazi ukumelana Amahora we-2 wokuzimela uma uqopha ku-4K, okusho ukuthi kuzohlala isikhathi eside uma kuqoshwa HD Full.
Ikhwalithi yesikrini ingenye iphuzu eliqinile, ukuba nokuningi 330 ppi, umxhwele impela, njengoba nawo wenze Isikrini sokuthinta.
Iminyaka ingadlula, kepha ihlala ingenye okungcono kakhulu njengamanje.
Ikhamera yesenzo Xiaomi YI 4K
Ubukhulu X x 65 42 21 mm
Usayizi weskrini 2.19 amasentimitha
Isixazululo sesikrini 640 × 330
Umseshi Ambarella A9SE
Inkambu Yokubuka I-155º
Ibhetri 1.400 mah
I-SJCAM SJ8 Plus
Enye ikhamera ye-Action esuka ku-SJCAM.
Kungashiwo ukuthi inguqulo evamile ye-SJCAM SJ8 Pro.
Nakuba ungenalo ikhono lokurekhoda [Email protected] njengomfowabo, iqukethe izici ezithile zenguqulo ye-Pro.
Lokhu kusho ukuthi nakho kunakho ZOOM ku-8x, njengoba inikeza isiqinisekiso sika ukuzinza kwe isithombe kuze kube nesinqumo esiphezulu ([Email protected]).
Futhi kuletha Uhlobo lwe-USB, ubengabhejwa okuhle ngumkhiqizo, ukukusiza ukudlulisa okurekhodiwe kwakho futhi izithombe ngokushesha futhi usengakhokhisa okusheshayo okuncane kunamakhamera ane-Micro-USB noma iMini-USB.
O isikrini ivela Amasentimitha angu-2.33 futhi inesikrini sokuthinta esifana nenguqulo ye-Pro, umehluko wokuxazululwa ongu-720 × 480.
Ibhethri izoba ngaphezu kokwanele 1.200 mah, uzokwazi ukwenza amarekhodi angaphezu kwemizuzu engu-90.
Ukukhetha okuhle kunoma ubani ongafuni ukuchitha ngaphezulu kwe-220 €.
Ikhamera yesenzo I-SJCAM SJ8 Plus
Isixazululo sesikrini 720 × 480
Umseshi I-Novatek 96683
inzwa I-Sony IMX117 12MP
I-ThiEYE T5 Pro
Uma ufuna ukwenza okuqoshiwe [Email protected] ou [Email protected] le Ikhamera ye-Action ingaba enye yezinto ezibonisiwe kakhulu.
A I-ThiEYE T5 Pro iqinisekisa ikhwalithi egculisayo, ibheka inani, kepha ungalindeli izimangaliso.
Idivayisi iqukethe ukunciphisa umsindo womoya, ngokungangabazeki ulusizo oluhle ngesikhathi sokuqoshwa kwevidiyo.
Ngalo uletha izesekeli eziningi, okugqamile yiyona ukulawula kude ukuthi singafaka okhalweni.
Ngalesi silawuli kuzoba ngokoqobo kakhulu ukusebenzisa ikhamera.
Okumangalisa kakhulu yiyona ubuqhawe ukuthi lokhu imishini itholakala ezitolo eziku-inthanethi, okwenza kufiseleke kakhulu ukuyithenga.
Ikhamera Yesenzo ingcwaba a [Email protected] okungaphansi 150 € é kunzima kakhulu ukuthola.
Ikhamera yesenzo I-ThiEYE T5 Pro
Ubukhulu X x 65 42 30 mm
Usayizi weskrini 2.0 amasentimitha
Isikrini sokuthinta Musa
Umseshi ICatch V50
inzwa I-Sony IMX078
Ibhetri 1.100 mah
I-SJCAM SJ9 Max
Uma ikamelo lokho ikhwalithi enhle yokwakha futhi lokho akudumazi ngesikhathi seqiniso.
Ukurekhoda, akuyona ngemuva kwamanye amakhamera we-Action angakwazi ukuqopha [Email protected], lena inekhwalithi enhle kakhulu yokuqopha, yilokho okudingekayo kwi-Action Camera ukuze ukwazi ukuthwebula okurekhodiwe okuhle ngenkathi sisenza umdlalo wethu esiwuthandayo.
O isikrini I-2.33 intshi IPS LCD ibona ukuthinteka kalula, mhlawumbe ngenye yezindlela ezinhle kakhulu kuleyo nhlonipho.
Enye inzuzo yedivayisi ukuthi ikwazi ukuba ngaphansi kwamanzi ngaphandle kokuvikelwa kuze kufike kumamitha ayi-10 futhi ngokuvikelwa ingafinyelela kumamitha angama-30.
Ukumangala kwalokhu ikamelo ukuthi kungashajwa ngocingo.
Imishini iza nezinye izesekeli, ngakho-ke awudingi ukuthenga ngokwahlukile.
Ikhamera ye-Action enhle ikhwalithi / intengo.
Ikhamera yesenzo I-SJCAM SJ9 Max
Ubukhulu X x 62.4 41 28.8 mm
Imemori yangaphakathi 128 MB
Ibhetri 1.300 mah
I-EKEN H6s, ikhamera yesenzo ukucabangela.
Le khamera inemininingwane ethandekayo, ngoba injalo ngezansi kwe-160 €.
Umklamo walokhu kuphela marca EKEN iyathandeka, inesikrini ngaphambili, esikhombisa ibhethri nesixazululo osisiqophile.
Iyunithi ingaqopha kuze kufike [Email protected], kodwa nakanjani izinto ezisetshenziswa kulolu hlu ulungele ukurekhoda [Email protected] ukuze kuqinisekiswe nokuthi ukuqiniswa kwesithombe.
O isikrini ngu-2 inch OLED okuzokhonza ngokuphelele ukubuka izithombe zakho noma ukurekhodwa okwenziwe, kusalokhu kubalwa isikrini sokuthinta ukwenza lula ukuphathwa kwemenyu yedivayisi.
Igumbi elihle / izindleko zokuhlomula.
Ikhamera yesenzo I-EKEN H6s
Ubukhulu X x 59.3 41.1 21 mm
Usayizi weskrini 2 amasentimitha
Isixazululo sesikrini 320 × 240
Umseshi AMBARELLA A12
inzwa I-Sony IMX078 14MP
I-Memory Card Slot Yebo (microSD kuya ku-64 GB)
Ibhetri 1.050 mah
Ikhamera ye-Action ewufanele.
Le khamera ingeyohlu lwamanani aphansi osuvele olawula ukwenza okurekhodiwe kukho [Email protected].
A ukuqiniswa kwesithombe Le divayisi inhle kakhulu, ezosiza kakhulu ekuthuthukiseni isipiliyoni ubheke kudivayisi.
O imishini kungaba ngenye yezinto ezinhle kakhulu kunhlu lwamanani wayo ukwenza okurekhodiwe Full [Email protected].
O isikrini singama-intshi angu-2, kuhle kakhulu ukuba nombono ongcono werekhodi noma izithombe ezithathwe.
Nge uhlelo lokusebenza kuza izesekeli eziningi, ezifana nesembozo sokukuvikela ukukuyisa olwandle, thatha idiphu wenze ukuqoshwa emanzini, phakathi kwezinye izesekeli.
Usengakwazi ukuthenga eyodwa imakrofoni yangaphandle bese uxhuma nge-Mini-USB.
Uma ufuna isikhathi eside ukuzimela lokhu kuzoqinisekisa ukuthi ngeke umvumele avele embi, abe naye 1.200 mah.
Enye i-Action Camera enhle.
Ikhamera yesenzo HawKeye Firefly 8SE
Ubukhulu X x 59 41 21 mm
Umseshi Ambarella A12S75
GitUp G3 Duo Pro inezici ezihehayo.
Kodwa yini ekhethekile kakhulu ngaye?
Okokuqala kuzoba yizinkampani ezimbalwa ze-Action Cameras uma kungenjalo kuphela Ikhamera Ebili, lokhu kusho ukuthi ungaqopha izigcawu ezimbili ezihlukile ngasikhathi sinye (ikhamera yesibili kufanele ithengwe ngokwahlukana), kuyathakazelisa ngempela, akunjalo?
Ukulungiswa okukhulu kwe idivayisi ivela [Email protected] (2880 × 2180), angeke ibe ne-4K njengamanye amakhamera ashiwo, kepha isithombe esihle nekhwalithi yevidiyo njengoba inkampani i-GitUP isiqalile ukujwayela amaKhamera ayo wokusebenza.
Ungarekhoda Full [Email protected], osebenza kahle kubasebenzisi abaningi, azi ikakhulukazi ukuthi ukuqoshwa kwenziwa ngeke kuthathe isikhala esiningi njengoba kunjalo ngesinqumo se-4K.
Lona ikhamera ingenye yezinto ezinhle kakhulu lapho ukhuluma nge-Full HD isinqumo.
O umsindo izophinde ihlatshwe umxhwele, ikhwalithi enkulu.
Ibuye ifake ezinye izesekeli ezifakiwe nedivayisi.
Omunye wamakhamera wokuqopha amahle ku-HD egcwele.
Ikhamera yesenzo GitUp G3 Duo Pro
Ubukhulu X x 59 41.5 36 mm
Isixazululo sesikrini 1280 × 720
Umseshi I-Novatek 96663
USB I-2 Mini-USB
I-Eken H9R iyikhamera ye-Action eshibhe kunazo zonke ohlwini.
Le modeli ngeke ikudumaze, ungarekhoda [Email protected] futhi ukwazi ukuqopha i-Full HD ku-60 fps.
Phezu kwakho konke, ngoba yidivayisi ephansi, ayikwazi ukuqinisekisa ikhwalithi enhle, noma kunjalo ayiziphathi kabi.
Iphuzu elibi kunazo zonke kule divayisi kuyobe lingenalo i-TouchScreen, kodwa lokho kusadingeka ukuthenga.
Isikrini siyi Amasentimitha angu-2, izokhonza ngokuphelele ukubona izithombe zakho nokurekhoda okwenzayo.
Ibhethri 1.050 mAh izonikeza isikhathi esingaphezu kwemizuzu engama-60 yokuqoshwa.
Ikhamera yesenzo ngentengo ehehayo.
Ikhamera yesenzo I-EKEN H9R
Ubukhulu X x 59.3 41.1 24.6 mm
Isikrini sokuthinta N / A
Umseshi I-Sunplus 6350
inzwa OV4689 12 MP
I-Memory Card Slot Yebo (microSD kuya ku-32 GB)
Isiphetho | Amakhamera Esenzo Angcono Kakhulu Okufanele Uthenge
Lawa ngamakhamera we-Action esiwabheka njengokuhamba phambili ngokuya ngezindleko / inzuzo.
Ngalesi sihloko sifuna ukukhombisa ukuthi wena kulolo hlangothi awudingi ukhipha amaphakethe akho ukuze ube neKhamera ye-Action enhle.
Jabulela manje, bhala ama-adventures akho bese wabelana nabangani bakho.
Izigaba Inqola yokuthenga Tags Ikhamera yesenzo, eken, I-Elephone, I-GitUp, hawkeye isicishamlilo, sjcam, thieye, Xiaomi, Yi Ukuzulazula kwendatshana
Ama-Drones ayi-9 Ahamba phambili Ukuthenga (Ikhwalithi / Intengo)
Ama-Smartphones Ama-9 Okuhamba Phambili Wokuthenga
INintendo ibukeka ifuna ukuhambela kude nemidlalo yeselula
IMicrosoft izovala isikhala seMixer futhi ibambisane ne-Facebook
I-Ready eDawn Studio itholwe yi-Facebook
I-Crash Bandicoot 4: Mayelana nesikhathi ekugcineni sembulwe ngokusemthethweni
Ingabe lokhu kuyilo lwe-iPhone 12?
I-Xiaomi Mi Band 5 isifikile futhi isivele ithengisiwe
Izithombe zibonisa usayizi we-PlayStation 5
AbakwaSamsung base bezokwethula ama-Galaxy M01s
Imodi emnyama izofinyelela eminye imisebenzi ye-Google
Amabhokisi Ama-TV Ama-7 Ahamba phambili Ukuthenga
9 engcono ephathekayo Low Cost Ukuze Thenga
9 Imikhiqizo ye-Xiaomi ehamba phambili yokuthenga
Ama-Scooters Ama-5 Ahamba phambili Wokuthenga (Ikhwalithi / Intengo)
Ama-Smartbands Ama-5 Akhethekile Okuthenga (Ikhwalithi / Intengo)
I-9 Amathebulethi Okuhle Okungayithola (Ikhwalithi / Intengo)
Yiba yingxenye yomndeni wethu!
© 2020 choicesegura.com • Kwenziwe nge GeneratePress
I-Voltar ao topo